Si loo hagaajiyo cadaadiska shaqada, loo abuuro xamaasad, mas'uuliyad, iyo jawi shaqo oo farxad leh, kobciya nolosha shaqaalaha hiwaayadda, hagaajinta daryeelka shirkadda, iyo kordhinta isgaarsiinta iyo is -dhexgalka shaqaalaha, Huyssen Power wuxuu abaabulay koox bannaanka rafting dhismaha ac ...
Awoodda Huyssen Power ee sahayda korontada ee aadka u khafiifka ah ayaa soo saartay taxane cusub oo ah 800W. Nalalka korontada ee aadka u khafiifka ah ee LED-ka, sababtoo ah magacu wuxuu tilmaamayaa, waa mid aad u khafiif ah oo khafiif ah, kaas oo la qabsan kara meel yar oo rakibidda; biyuhu, korontada oo tayo sare leh oo ku saabsan dhalinta suuqa ...
Huyssen's PFC sahayda korontada ee aan biyuhu lahayn waxaa ku jira awood laga bilaabo 150 Watt ilaa 600W. Awoodda soo -saarku waxay noqon kartaa 5V, 12V, 24V, 30V, 36V, 48V, iwm. Waxaa lagu baakadeeyay xirmooyin adag oo biyo-mareen ah, boodh-ka-caag ah, aluminium shub ah oo lagu qiimeeyay IP67. Soo -gelinta iyo soo -saaristu waa iyada oo la mariyo qanjidhada fiilada ee la shaabadeeyey, isku -xirayaasha wareega ...
Sahayda Awoodda Korontada Sare ee warbixinta cilmi -baarista Suuqa Korontada Beam waxay daraasaysaa heerka suuqa, muuqaalka tartanka, cabbirka suuqa, saamiga, heerka kobaca, isbeddellada mustaqbalka, wadayaasha suuqa, fursadaha, caqabadaha shuruudaha ...
Bixinta korontada tareenka ee DIN waxay ku saleysan tahay heerar taxane ah oo ay abuureen Deutsches Institut fur Normung (DIN), oo ah urur heer qaran oo ka jira Jarmalka. Sahaydan korontada waxay u beddelayaan hadda (AC) si ay toos ugu beddelaan kuwa hadda jira (DC) ee kala duwan. Isticmaalaha ugu dambeeya wuxuu heli karaa ...
Suuqa korontada ee barnaamijka ee barnaamijka 2021
Abriil 29, 2021, New York, USA: Shirkadda Warshadaha iyo Cilmi-baarista waxay ku dartay warbixintii ugu dambeysay ee “Suuqa Barnaamijka Korontada ee Barnaamijka Caalamiga ah ee DC 2021-2028 ″ ee buugga warbixinta cilmi baarista suuqa. Suuqa barnaamijka korantada ee barnaamijka barnaamijka DC ayaa si aad ah loogu qaybiyey si loogu oggolaado akhristayaasha inay h ...
Doorka capacitors ee korontada
Capacitors waxaa loo isticmaali karaa beddelidda sahayda korontada si loo yareeyo buuqa dilaaca, loo hagaajiyo xasilloonida korontada iyo jawaabta ku meelgaarka ah, laakiin waxaa jira noocyo badan oo iyaga ka mid ah, aan isla eegno. Nooca Capacitors Capacitors waxaa loo qaybin karaa capacitors chip iyo capacitors plug-in accordi ...
Korontada mashiinka oksijiin ee hydrogen
Mashiinka oksijiin ee hydrogen waa nooc ka mid ah qalabka tamarta kaas oo adeegsada teknoolojiyadda biyaha elektrolytka si looga soo saaro hydrogen iyo gaaska oksijiinta biyaha. Haydarojiin waxaa loo isticmaalaa shidaal iyo oksijiin si loo taageero gubidda. Waxay beddeli kartaa acetylene, gaaska, gaaska dareeraha ah iyo gaasaska kale ee carbonaceous. Waxay leedahay xayeysiiska ...
2021 kulan mahadsanid
Bishii Maarso 31, 2021, waxay ahayd sannad -guuradii Huyssen Power. Si aan ugu mahadcelino taageerada macaamiisheena oo aan ugu ammaano shaqaalaha Huyssen Power shaqadooda wanaagsan, waxaan ku qabannay kulan mahadcelin ah Degmada Longhua, Shenzhen. Waad ku mahadsan tahay inaad jidka oo dhan timid oo aad si aamusnaan leh u taageertay ol ...
Awooda Korantada Dc, Led Strip Light transformer, beddelidda korontada hab hab, Led Strip Light Power Supply, Awoodda Awoodda Isbeddesha, Awoodda Awoodda La -habeeyay,